အမှတ်တမဲ့…. နှင်း နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး… | အမှတ်တမဲ့.....နှင်း....
အမှတ်တမဲ့…. နှင်း နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး…
July 5, 2009 in အမှတ်တမဲ့ နှင်း နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး | Tags: အမှတ်တမဲ့...နှင်း
ခေတ်အဆက်ဆက် ကဗျာဆိုတာ လူကြိုက်အနည်းဆုံး အနုပညာပစ္စည်းပါ။
အမှတ်တမဲ့…. နှင်း ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်တုန်းက ဒီဘလော့ခ်ကို ၀င်ကြည့်မယ့်သူအရေအတွက်ဟာ ဆယ်ဂဏန်းတောင် ရှိမှရှိပါ့မလားလို့တောင်
သံသယ၀င်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာဆီ ရူးသွပ်မိုက်မဲစွာ ကျွန်တော်တို့
ဆက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မမေ့မလျော့ပြောဆိုချင်တာပါပဲ။
ရူးသွပ်မိုက်မဲမှုတွေနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ရှင်သန်နေပျော်နေတာပဲ မဟုတ်လား ကိုဘုန်းနေသွန်းရယ်
ဆက်ရူးနေပါဦး ရူးသွပ်မှုရဲ့အသီးအပွင့် စကားလုံးတွေက လှတယ်။
ခုနက ရေးထားတာတွေအများကြီး ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပျောက်ကုန်တယ်
…ရူးသွပ်မိုက်မဲမှုတွေကပဲ ကျွန်မတို့ရှင်သန်နေဖို့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်နေသေးတယ် ဆိုတော့
ရူးသွပ်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စကားလုံးများက လှတယ်လေ။
ဒါကိုမှ တခုတ်တရ ရင်မှာလွယ်ပိုးထားချင်သူတွေရှိပါသေးတယ်။
ကဗျာတွေကို ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်ပေမယ့် ကဗျာ လှလှ နုနုလေးတွေကိုကြိုက်တယ်
နှင်း ရူးသွပ် သူ နောက်တယောက် လာတွေ့နေပြီယယး)
မကြာ မကြာ လာလည်ပါ့မယ်
ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ပါတယ်.. ဦးဦးလား ကိုကိုလား.. အန်ကယ်လားတော့မသိလို့ ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိပါ..း)
တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်ချလိုက်ရင် ကဗျာတွေ အစာမကြေဖြစ်မှာစိုးလို့…
လာကြည့်သွားတယ်။ ကဗျာတွေ ဆက်ရှင်သန်ပါစေ။ အားပေးပါတယ်။
The reason for that poem is the least popular art may be “poem is poem and life is life.” Actually poems are beautiful and tender, but real life is really difficult and hard so that to be felt the poems. That’s why…..
ဟုတ်ကဲ။ သူငယ်ချင်းကြီး အောင်ပိုင်စိုးက အမှတ်တမဲ့..နှင်းကို အွန်လိုင်းမှာ တွေ့နိုင်တယ်လို့ ပြောထားတော့ ဒီနေ့ည အသည်းအသန် .. မရှာလိုက်ရပါဘူး။ ဂူးဂဲလ်မှာ နှင်းလို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ အမှတ်တမဲ့နှင်းက အမှတ်တရဖြစ်အောင် ချဉ်းနင်းထွင်းဖောက်သွားပါတယ်။ အချိန်အတန်ကြာ အရိုင်းဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသား နှင်းတို့ရဲ့ အနုပညာနဲ့ နူးညံ့သိပ်သည်းသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။